एक वर्षपछि बारेकोटमा चिकित्सकसँगै एक्सरे मेसिन - नेपालबहस
एक वर्षपछि बारेकोटमा चिकित्सकसँगै एक्सरे मेसिन
| १०:३४:५२ मा प्रकाशित
१९ वैशाख,जाजरकोट । वर्ष दिनपछि बारेकोट गाउँपालिकाले चिकित्सकसँगै एक्सरे मेसिन पाएको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लिम्सामा दरबन्दीका चिकित्सकको सरुवा भएको करिब तीन वर्षपछि गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा चिकित्सक नियुक्त गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वीरराज सिंहले जानकारी दिए । गत चैत ६ गतेदेखि रु एक लाख २४ हजार मासिक तलब पालिकाले भुक्तानी गर्ने सम्झौताअनुसार लिम्सामा चिकित्सक गायत्रीप्रसाद शर्मालाई नियुक्त गरेको हो ।
अहिले लिम्सामा भिडियो एक्सरे, इसिजी सेवा र ल्याब सेवा सञ्चालनमा आएको प्रमुख सिंहले बताए । महिना दिनभित्र सादा एक्सरे सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी रहेकोसमेत उनले जानकारी दिए । सरकारी दरबन्दीका चिकित्सक करिब एक वर्ष लिम्सामा कार्यरत रही पढ्न गएका थिए । चिकित्सक पढ्न गएसँगै तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको दरबन्दी अहिलेसम्म पूर्ति हुनसकेको छैन । सरकारी दरबन्दीको चिकित्सक पठाइदिन मन्त्रालयलाई पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि गाउँपालिकाले दुई वर्षअघि आफैँले तलब र भत्ता दिने गरी चिकित्सक नियुक्त गरेको थियो ।
नियुक्त गरेका चिकित्सक पनि लामो समयसम्म नबसेपछि लिम्सामा एक वर्ष चिकित्सकविहीन भएको थियो । वर्ष दिनपछि अहिले पालिकाले फेरि आफैंले तलबभत्ता उपलब्ध गराउने गरी चिकित्सक नियुक्त गरेको हो । नयाँ चिकित्सक आएसँगै भिडियो एक्सरेसँगै अन्य सेवा सहजरूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले बताए ।
एक्सरेकै लागि जाजरकोट सदरमुकाम तथा जिल्लाबाहिर जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ । भर्खरै मात्र सडक सञ्जालसँग जोडिएको बारेकोट गाउँपालिकामा अहिले दैनिक बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको बताइएको छ । पालिकामा अत्याधुनिक भवन निर्माणका लागि स¬ङ्घीय सरकारले बजेट पठाए पनि चिकित्सक नपठाउँदा पालिका आफैंले चिकित्सक व्यवस्था गर्नुपरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका अन्य पालिकामा भवन निर्माणका लागि बजेट पठाए पनि चिकित्सक नपठाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको पालिकाहरूले बताएका छन् ।
गाउँघरमा चिकित्सक सेवा कार्यक्रम २ महिना पहिले
पाँचथरका गाउँभरि ज्वरोका बिरामी,अधिकांशमा कोरोना संक्रमण ५ मिनेट पहिले
कोरोनाले सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर आशा चौधरीको मृत्यु २५ मिनेट पहिले
दैलेखमा कोरोनाले एउटै समुदायका ९ जनाको मृत्यु २६ मिनेट पहिले
कोरोनाबाट जनस्वास्थ्यकर्मी रत्नलाल श्रेष्ठको ज्यान गयाे ३२ मिनेट पहिले
उपनिर्वाचनमा संक्रमित मतदातालाई छुटै मतदान केन्द्र, कर्मचारीलाई पीपीई ! ४० मिनेट पहिले
विद्यार्थीको पीडा : अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ दिन ! ४० मिनेट पहिले
नागरिक लगानी कोषले गर्यो ५९ करोड बढि मुनाफा, प्रतिशेयर आम्दानी कति ? ४३ मिनेट पहिले
निर्धन उत्थानले बिहीबारदेखि संस्थापक शेयर लिलामी बिक्री गर्ने, शेयरमूल्य कति ? ५९ मिनेट पहिले
नेपाल पक्षलाई फकाउँदै ओली ५ दिन पहिले
कास्की कांग्रेसद्वारा कोरोना उपचार प्रभावकारी बनाउन आग्रह २ हप्ता पहिले
सुर्खेतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक २ हप्ता पहिले
भारत युवती बेच्ने कार्यमा संलग्नविरुद्ध मुद्धा ७ महिना पहिले
कोभिड प्रभावित अर्थतन्त्र उकास्न साझा प्रयास गर्नुपर्नेमा गभर्नर अधिकारीको जोड ७ महिना पहिले
युरोपेली मुलुकबाट आएका यात्रुहरूले बंगलादेशमा दुई हप्ता क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने २ महिना पहिले